Manao ny asany any Dubai sy Abou Dhabi izao isika
Fa maninona i Dubai no toerana tsara indrindra miasa?
Janoary 6, 2018
Famerenana ny asa fitoriana ao Dubai 2019 🥇
navoakan'ny Dubai City Company at Janoary 7, 2018
Manao ny asany any Dubai izao isika
Izahay dia mandray mpiasa asa ao Dubai. Dubai City Orinasa afaka Manampy anao hahatratra ny asa fitadiavana asa. Orinasa Dubai manampy ny mpifindra monina mba hahazo asa Emira Arabo Mitambatra. Ny fanontaniana dia Ahoana no fomba tena hahita asa any Dubai?. Raha ny tokony ho izy dia mila manaraka vitsivitsy ianao raha te hahita asa any United Arab Emirates.
Rehefa mieritreritra ny raharaham-barotra Renivohitra Arabo. Mazava ho azy fa tonga eto amin'izao tontolo izao i Dubai sy i Abu Dhabi. Na dia mety ho marina izany ireo mpikaroka momba ny asa ary miresaka momba ny karama tsy manan-ketra any Dubai. Dubai ny jirony ary mamiratra Fampandrosoana ny asa amin'ny orinasa avo lenta. Amin'ny lafiny iray, i Dubai sy i Abu Dhabi dia mahafantatra ny fomba iatrehana. Noho izany dia tsy mila manahy momba ny toerana handaniana ny volanao sarotra ianao.
Azonao atao ny mikaroka ireo mpandraharaha ara-barotra mametra ny fahabangan-toerana amin'ny ankapobeny. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia mila mahafantatra tsara ny tsara indrindra ianao toerana ho an'ny asa fitadiavana asa. Raha ny marina, raha mijery tranonkala malaza ianao. Dubai City Ny orinasa foana no voalohany amin'ny lisitra, miaraka amin'ny asa maro mikaroka lahatsoratra. Manana dokam-barotra avy amin'ny toerana maromaro izahay, izay mahatonga ny orinasa ho toerana tsara indrindra ao Dubai.
Ny tanànan'i Dubai dia efa nisy hatrany hatrany ho an'ny mpikaroka any Indiana. Betsaka ny orinasa manokatra Biraon-doha ary maniry haingana amin'i Abu Dhabi. Ny fametrahana fomba iray hafa hahazoana asa any Abu Dhabi no tena zavatra tsara indrindra mety hitranga aminao.
Ny antony mahatonga ny Jobs any Emirates dia tsy mitovy amin'ny Eoropa
Amin'ny lafiny rehetra, ny fitsipika ao Tsy mitovy ny Moyen Orient ny Eoropa ary Etazonia. Asa iraisam-pirenena mety ahitanao any ivelany any, tsy ao Emirate ihany saingy tsy midika izany fa tsy mbola afaka karama tsara ianao. Ny Dubai sy i Abu Dhabi dia hafa noho London na Paris. Maro be mpikaroka avy any ivelany avy any Azia. Indrindra avy any Inde sy Pakistana.
Mazava ho azy fa tsy ny tsirairay no afaka nitsidika an'i Dubai sy Abu Dhabi noho ny fikarohana. Noho izany, ireo mpikatsaka asa no nangatahiny mba hampiasana ny asa avy any amin'ny fireneny. Nefa mampalahelo ny ny vidiny ho tonga any Emirates Tena goavana izany. Executive mpikaroka momba ny asa avy any India sy Arabia Saodita ary Qatar Matetika dia misoroka matetika ny mpikaroka. Amin'ity andro ity, avelao hiatrika izany, Dubai dia mihoatra noho ny orinasa orinasa goavambe.
Ny porofo mampiaiky indrindra fa mitady asa Miala tsiny amin'ny asa any Adu Dhabi. Moa ve i Abu Dhabi ary i Dubai dia lafo vidy hanombohana ny asa. Rehefa manandrana manomboka mandeha amina asa any Emirates ianao dia mila mitady vola. Ary ny tena tsy fitovizany dia any Londres sy Paris afaka mahazo asa mora foana ianao ao anatin'ny 1-3 volana. Na izany aza, any Dubai sy Abu Dhabi, handany volana 6.
Ny asa any Afovoany Atsinanana amin'ny 2019
Ny asa any Moyen-Orient dia glamour ho an'ny asa. Ary ity toerana ity ho an'ny asa amin'ny 2019. Amin'izany toe-javatra izany dia afaka ny ho foana ianao Manorata any amin'ny tranokalan'ny aterineto toy ny Dubai Company manintona ny mpitsidika rehetra i Dubai. Olona tonga any UAE tsy haiko ny risika ateraky ny asa.
Fantatry ny mponina fa mety hieritreritra ianao manomboka miasa ao Dubai eo amin'ny mitsidika ny visa nefa tsy manara-dalàna io. Tsy maninona izay volanao. Rehefa tonga any Abu Dhabi ianao dia mety tsy ampy izany. Most ireo mpiasa vahiny tonga mpisolo toerana mahomby ho an'ny orinasam-pifandraisana lehibe. Noho izany, aza manandrana mandany andro sy omano ny tenanao amin'ny fivarotana lavitra alohan'ny hahatongavanao any Dubai.
Araka ny fanadihadian'ny fanadihadiana farany tamin'ny alàlan'ny fitantanana ny vavahadin-tserasera, 45.5% mamaly orinasa any Atsinanana-Afovoany. Manao fikarohana lalina foana aho na dia vao miantso ireo kandidà vaovao aza. Ny mpitantana ny fitadiavana dia mikaroka hatrany ny profil sosialy ary manara-maso ny volan-tserasera vaovao alohan'ny hanakaramana. Manao ny asany any Dubai izao isika koa aza mandany ny fotoanao.
Amin'ny toe-javatra sasany Embryte Emirates any Afovoany Atsinanana mangataka taratasy fangatahana asa an-tserasera. Amin'ny ankapobeny, fikambanana marobe manadihady an'i Linkin sy Facebook. Jereo ihany koa ny adiresy tranonkala mpampiasa. Ary orinasa maromaro ao amin'ny tambajotra media sosialy sy ny mombamomba an'i LinkedIn kosa diniho ny zavatra mety indrindra momba ny kandidà iray ankehitriny.
Any aoriana, ho voamarina tsara ny firotsahan-tsainao miaraka amin'ny fanondroana rehetra avy amin'ny mpampiasa farany, indrindra, ny asa nomena sy orinasa orinasa zava-dehibe ny kolontsaina. Mandritra izany fotoana izany dia mila mampitombo ny fahitanao amin'ny Internet any UAE. Na ho ela na ho haingana hitantana ny lazanao amin'ny Internet sy hanandrana Manangana ny marika an-tserasera an-tserasera sy sary tsara anao hanampy anao hametraka asa.
Alefaso ny resadresaka ho an'ny Dubai Jobs amin'ny 2018
Noho izany, aza miala amin'ny fotoananao ary avereno ao amin'ny orinasa Dubai City Company ny resume. Izahay dia manampy ireo mpikaroka avy any Inde, Pakistan, Arabia Saodita, UK, ary Qatar. Raha mitady ianao ho an'ny vahaolana haingana amin'ny fikarohana. Dubai City Company no orinasa tonga lafatra ho anao. Izahay izao dia mizaka asa any Dubai. Miara-miasa amin'ireo mpandray mpiasa ao Dubai izahay. Orinasa HR any Abu Dhabi aiza afaka mitantana fanampiana amin'ny asa ho anao izahay. Mandraka ankehitriny dia afaka mandefa Resume amin'ny orinasantsika any Dubai ianao.
Ilainao koa ny mampakatra ny anao CV any amin'ny toeram-piasana hafa ao Dubai. Misy ny sasany amin'ireo tranonkala ambony tokony hitantana ny famerenanao. Fitaterana vaovao rehetra isaky ny manandrana ahazoana asa any Dubai. Ny kompania dia manampy betsaka araka izay azontsika atao. Ohatra, manolotra tolotra momba ny tolotra amin'ny tranokalanay izahay. Amin'ity ireo mpikatsaka asa amin'ny fampiasana finday ary ny fampiharana amin'ny asa. Eritrereto hoe indroa ianao alohan'ny handehananao.
Ao amin'ny 2018 sy 2019 ao Dubai City Company dia afaka mahita ny fironana ho an'ny asa any Dubai ho an'ny Filipino. Ka raha avy any amin'ity firenena ity ianao dia azonao antoka mahita asa miaraka aminay. Ny ekipa mpitantana anay dia mametraka olona isan'andro amin'ireo firenena ireo. Ohatra, tsarovy ny orinasa manakarama. Ireo toeram-piofanana any Dubai ary ireto fantsona vavahadin-tserasera. Izy ireo dia samy mihevitra ny hampihatra amin'ny Resume.
Dubai Jobs sy ireo Pakistane mitady mpikaroka
Ao amin'ny 2018 sy 2019 ny ankamaroan'ny mpitady asa dia mitady asa any UAE. Ny sasany amin'izy ireo dia tonga tany Dubai na Abu Dhabi ihany. Aza lany andro ary ampidiro ny orinasa tamin'ny Dubai City Company. Ny ekipanay dia manampy ireo mpitady asa vaovao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mankany mahazo asa any Dubai. Ny ekipanay dia miditra foana toerana hanampiana anao hahatratra ny tanjonao. Na iza na iza izahay dia avy aminay manampy ireo mitady asa any Indiana, Pakistane mpivahiny, ary ireo mpihazakazaka karakarain'ny Afrikana sambany mba ho mpiasa matotra ao UAE.
Ny tanjonay dia ny hanampy olona maro araka izay tratranay. Ohatra, Pakistane ny mpiasa dia iray amin'ireo lehibe indrindra any UAE. Mahafantatra zavatra maro momba ny kolontsaina Emirates izy ireo, manana andrim-pampianarana amin'ny fireneny koa izy ireo. Ohatra ny sekoly any Pakistan daholo Ny Silamo ary izy ireo dia mitantana ny kolontsaina mitovy amin'ny UAE. Ny ekipanay isan'andro dia mandray CV maro sy fametrahana sy fandraisana mpiasa ho an'ny asa ao Dubai. Etsy ankilany Banky jobs vacancies dia malaza be any UAE. Indrindra ho an'ny Pakistani expats afaka manana fahafahana tsara asa ianao.
Amin'ny teny farany ho an'ireo olona avy ao Pakistana. Manoro hevitra mafy izahay mba hitantana ny tenanareo Mankanesa any Dubai. Misy habaka be dia be ho an'ny karazana mihetsika amin'ny asa. Ohatra, afaka mahita trano fandraisam-bahiny maromaro ianao ny fanakarama any Dubai sy Abu Dhabi. Koa mijere hatrany ary aza kivy na oviana na oviana amin'ny mety ho anao na new job seeker in Emirates.
Fanelanelanana iraisam-pirenena avy ao Dubai
Misy tsaho maro ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena mikatsaka asa. Ohatra amin'ny taona manaraka mankany amin'ny 2020, Ny orinasa Saodita dia mandefa kandidà. Misy fomba maro hitadiavana asa manerana ny tsena iraisam-pirenena. Arak'izany, Manampy vehivavy mpivahiny izahay halefa any Dubai. Ary etsy ankilany, dia manapaka avy ao Dubai ho an'ny tsena iraisam-pirenena izahay.
Ny iray amin'ireo ohatra amin'ny fomba fiasantsika dia ny vondrona asa. Azonao atao ny mahita asa Toro-lalana ho an'ny mpitatitra olona any amin'ny Golfa izay ahafahanao mandefa ny CV efa nohavaozinao na mampifandray mivantana. Safidy marobe ho an'ny mpitady asa dia tsara lavitra noho ny fomba tokana iray. Ao an-tsaina, dia namorona asa fanarenana maromaro izahay fitaovana izay azonao hampiasaina mba hahitana asa. Mazava ho azy fa tsy resaka fotsiny fa afaka miresaka aminy olona izay miezaka miresaka amin'ireo mpanafika ao amin'ny Golfa.
Ataovy azo antoka fa tena jerena tsara ny mombamomba anao Linkedin. Raha mitady asa amin'ny MBA ianao Mila manana ny fotoam-pianaranao ianao. Ny fialamboly dia mila mijery mihoatra noho ny mahagaga. Ny tsipirian'ny asa momba ny asa dia tsy maintsy tsy misy pentina.
Ny tanànan'i Dubai dia toerana ho an'ny mpihaza
Ok, ianao tia an'i Dubai, ankehitriny dia fotoana iray hifanakalozana ary hahitana ny antony. Ity toerana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny resaka traikefa miasa ary ny kolontsaina. Ilay malaza Ny fisokafan'ny vidin-tsakafo ara-barotra amin'izao fotoana izao dia misokatra ho an'ny mpivarotra. Amin'izany, ao an-tsaina, tokony manana jiro mavo ianao miposaka eo amin'ny lohanao.
Fantatry ny olona tsirairay Nahoana i Dubai no toerana tsara indrindra hiasa?. Tsy andoavana hetra fotsiny izany. Fa manana safidy lehibe amin'ny fampandrosoana asa. Raha ny tena izy dia isika mametraka mihoatra ny 20 arivo mpikaroka vaovao vaovao tamin'ny taon-dasa. Izany rehetra izany dia tsy azo atao afa-tsy satria mampiasa ny haino aman-jery sosialy be dia be izahay. Mpitsidika vaovao mifindra monina any UAE avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ohatra, mpitsidika ho an'ny asa avy any Afrika Atsimo dia miasa am-pahamendrehana any UAE.
The Fihaonana an-dalambe ao Dubai ho an'ny Indiana misokatra foana for expats. Satria ny renivohitry ny Emirà Arabo Mitambatra manakarama foana. Noho izany antony izany dia niteraka ny orinasantsika tatitra maromaro momba ny fomba hahitana asa. Ohatra, ny ekipanay dia manome torolàlana amin'ny fomba fitadiavana asa miaraka amin'i Google ao Dubai. Noho izany, aza miala amin'ny fotoananao ary mahazo fahafahana vaovao amin'ny asa any UAE.
Ny asa any Dubai City!
Find a Job in Dubai? Mahagaga fa afaka mahazo izany ianao. Manomboha fotsiny asa vaovao amin'ny Dubai!
Afeno ny famerenana ho an'ny fastest Tanàna mitombo eto an-tany! - Dubai City Company
Instagram amin'ny credit: https://www.instagram.com/hhshkmohd
Manome ny tsara ny orinasa City ao Dubai torolàlana ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Dubai mitsotra. Ka miadidy izany ao an-tsaina, dia afaka mahazo izao ianao izao mpitarika, toro-hevitra sy asa any amin'ny United Arab Emirates miaraka amin'ny fiteninao.